कसरी जित्लान मेस्सीले ? जसरी हार्न चाहदैन फ्रान्स ! - कसरी जित्लान मेस्सीले ? जसरी हार्न चाहदैन फ्रान्स !
कसरी जित्लान मेस्सीले ? जसरी हार्न चाहदैन फ्रान्स !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १6 असार, 06:10:11 AM
काठमाडौं १६ असार । शनिबार आजदेखि रुसमा विश्वकप नकआउट चरणका खेल शुरु हुदैछन् । नकआउट चरणको पहिलो खेल नै निकै प्रतिष्पर्धात्मक र रोमाञ्चक बन्ने पक्का छ ।
अर्जेन्टिना र फ्रान्स आफै पनि रुस विश्वकपका उपाधि दाबेदार हुन् । उनीहरु दुबै टोलीले पछिल्ला खेलमा फितलो प्रदर्शन गरेपनि स्टारहरुले भरिएको फ्रान्स निकै बलियो टिम हो ।
यता सुपरस्टार लियोनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना पनि उनकै उपस्थितीले विश्वकप उपाधिको दाबेदार मानिदै आएको छ । गत विश्वकपको फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना यो विश्वकपको शुरुमै लड्खडाएको छ ।
तर तुलनात्मक रुपमा फ्रान्सले अहिलेसम्म एक चोटी मात्रै विश्वकप जितेकाले अर्जेन्टिना भने इतिहासमा बलियो देखिन्छ । अर्जेन्टिनाले भने दुई पटक विश्वकप जितेको छ।
यसअघि दुई टोली १२ पटक आमनेसामने भएकामा मेस्सीको टिमले ६ पटक जितेको छ । तर फ्रान्सले मात्रै २ पटक जित्दा ३ पटक बराबरी खेलेको छ । यसले पनि इतिहासमा फ्रान्स पछाडी नै देखिन्छ ।
उसो त फ्रान्सले युरोकप २०१६ को फाइनलमा क्रिष्टियानो रोनाल्डोको टिमसँग हारेर उपाधि गुमाएको थियो । ठिक यसैगरी चार बर्षअघि मेस्सीले जर्मनीसँग गोल हान्न नसकेर ठूलो अवसर गुमाएका थिए ।
यी दुई टोली अन्तिम १६ मै भिड्न लाग्दा एक टोली घर फर्किनेछ । तर कसले कसलाई हराउँछ ? त्यो भने बेलूकी पौने ८ बजेपछि मात्रै थाहा पाइनेछ ।
फुटबल समग्रमा टिम गेम हो । एउटा खेलाडीले धेरै प्रदर्शन गरेपनि टिम गेम जत्तिको भरपर्दाे र बलियो भने हुदैन । यस मामिलामा फ्रान्स निकै अगाडी छ ।
समुह चरणमा फितलो प्रदर्शन गरेपनि उसका सबै खेलाडी स्टार छन् । डिफेन्समा रियलका भराने काफी छन् । जसले पोर्चुगलका पेपेलाई रिप्लेस गरेका हुन् ।
उनी डिफेन्सका साथै हेड गोल गर्न पनि माहिर छन् । फ्रान्सको मिडफिल्ड सम्भवतः रुस विश्वकपको सबैभन्दा बलियो मिडफिल्ड हो । उसका एन्टोइनी कान्टे र पउल पोग्बा प्रिमियर लिगकै उत्कृष्ट र महंगा मिडफिल्डर हुन् ।
त्यसमा बार्सिलोनाका उम्टिटीले फ्रान्सको कप्तानी गरिरहेका छन् । मेस्सीलाई रोक्ने जिम्मा पनि उम्टिीटीले लिइसकेको बताएका छन् ।
फ्रान्सको फरवार्ड लाइन झनै उत्कृष्ट छ । अर्जेन्टिनाभन्दा कमजोर मानिएपनि एमबाप्पे, ग्रिजमेन र जिराउडले जुनसुकै बेला पनि खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।
फ्रान्सको टिमगेम भन्दा अर्जेन्टिना कमजोर छ । उसका फरवार्ड मेस्सी र मिडफिल्डर मास्चेरानोबाहेक अरुको भर पर्ने आधार छैन् । फरवार्डमा एक सय एक खेलाडी भएपनि अर्जेन्टिनालाई संकटमा गोल गर्न प्रिमियर लिगका अग्वेरो, फ्रेन्छ लिगका डि मारिया, सिरी ए का हिगुइन र डिबाला असफल भइरहेका छन् ।
यस्तोमा आज पनि मेस्सी चम्किएर गोल गरे भने फ्रान्सलाई केही भन्नु छैन । तर रुस विश्वकपमा एक गोल गरेका मेस्सीलाई चमत्कार देखाउन फ्रान्सका स्टारहरुसँग पक्कै पनि सजिलो छेन् ।
२०७५, १6 असार, 06:10:11 AM